Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း)
Dr. Sandy Kyaw မှ ရေးသားသည်။ 04/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ငါ့ဆီမှာ Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Male pattern baldness (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Male pattern baldness. http://www.nytimes.com/health/guides/disease/male-pattern-baldness/overview.html. Accessed October 31, 2017
Male pattern baldness. https://www.healthline.com/health/male-pattern-baldness#causes2. Accessed October 31, 2017